Stream2Chromecast: Tambanudza mavhidhiyo ako kubva kumagumo kuenda kuChromecast yako | Linux Vakapindwa muropa
Pasina mubvunzo Chromecats chishandiso chakanakisa izvo zvinotibvumidza isu kunakirwa nemultimedia yedu zvemukati, ichi chishandiso inotibvumira kushandura chero terevhizheni kuva smartv. Iko kushandiswa kwechigadzirwa chedu kunoenderana nemunhu wega uye kufunga kwavo.
Kune akawanda mafomu anotibvumidza kutumira zvemukati kuChromecast yedusemuenzaniso, kubva kuAppleamoni edu anozivikanwa zvikuru maapplication ndiNetflix, Spotify, Google Play Music, Shiri dzinotsamwa uye zvimwe zvakawanda.
Pachiitiko ichi Ini ndichakuudza zvishoma nezve ichi hombe chishandiso chakanyorwa mu python uye kuti musiki wayo anoigovana nenharaunda kubva pakutanga kwaingova chirongwa chega. Iko kunyorera inonzi Stream2Chromecast.
Stream2Chromecast chishandiso chinoshandiswa kuburikidza nemutsetse wekuraira, iyo inotibvumidza kupfuudza akasiyana mafomati evhidhiyo asingaenderane neyedu Chromecast chishandiso pavanotambidzwa pairi, saka zvese izvi zvinoitwa munguva chaiyo.
Inokutendera iwe kutenderera odhiyo uye vhidhiyo kune Chromecast chishandiso.
Inokutendera kuti ufambise mavhidhiyo epamhepo nekungoisa iyo URL yacho, iyo faira inofanirwa kugadzikika uye fomati inoenderana neChromecast, nekuti haigone kudhindwa.
Iyo inotibvumidza isu kudhinda chero fomati isingatsigirwe neChromecast munguva chaiyo (tichishandisa FFmpeg kana Libav), saka tinodzivirira kuve nekushandura mavhidhiyo acho nemaoko.
Inopa ekutanga kudzora mirairo: kumbomira, nyeredzi, mira kutamba vhoriyamu pasi uye vhoriyamu kumusoro (parizvino izvi zvinongoshanda chete kana zvisiri kudhindaina)
Inokutendera iwe kudoma chishandiso kana akawanda maChromecast akabatana pane imwechete network;
Inotsigira kupfuura yetsika transcoder parameter kune ffmpeg kana avconv (nekuda kweizvi, unogona kuseta mhando, wedzera zvinyorwa zvidiki, kunyangwe Stream2Chromecast isingatsigire iyo zvakananga, nezvimwewo).
Inotsigira kududzirwa kwechiteshi kuti ushandise kushambadzira midhiya.
Inogona kutamba mafaera ekuteerera kunyangwe isingaratidze metadata.
1 Maitiro ekuisa Stream2Chromecast paLinux?
2 Mashandisiro ekushandisa Stream2Chromecast kukanda zvemukati kuChromecast?
Maitiro ekuisa Stream2Chromecast paLinux?
Sezvandambotaura nguva pfupi yadarika, chishandiso ichi chakavakirwa pane python, saka pakuisirwa kwayo tinogona kuzviita nenzira dzinotevera:
ZveUbuntu 16.04 14.04 uye zvigadzirwa zvatinogona kushandisa inotevera repository:
Iye zvino yeDebian uye zvimwe zvekuparadzira zvinotsigira madhiri mapakeji, tinogona kurodha pasi .deb package uye kuiisa, isu tinongofanirwa kurodhaunirodha kubva chinotevera chinongedzo.
Mushure mekurodha pasi, isu tinongofanirwa kuiisa neyedu yatinoda package maneja kana neinotevera kuraira kubva kune iyo terminal:
Uye kune kumwe kugovera isu tinofanirwa kurodha pasi kodhi kubva kune yayo git, chinongedzo chiri inotevera.
Pakupedzisira, Stream2Chromecast inoda kutsamira kwakakosha kukwanisa kushanda:
Chekupedzisira uye pasina kukanganwa kutaura, zvine musoro uye zvakakosha kwazvo izvo yako Chromecast uye komputa yako zvakabatana kune imwechete network.
Kamwe kuiswa kwacho kwapera, tinogona kushandisa iyi application kutanga kutumira zvemukati kune yedu Chromecast chishandiso.
Mashandisiro ekushandisa Stream2Chromecast kukanda zvemukati kuChromecast?
Sezvandambotaura, chishandiso ichi chinoshanda pasi pemutsetse wekuraira, saka kushandiswa kweiyo terminal kwakakosha, kana iwe ukaisa iyo pasuru package kana ukashandisa dura. iko kushandiswa kwemirairo zvinotevera:
Zvimwe pasina panzvimbo ehe wakadhinda kodhi kubva git, zita remazita rinoshanduka uye zvakare unofanirwa kugara uchizvimisikidza pane iyo Stream2Chromecast dura nguva dzose kuti ugone kuishandisa.
Iwo wekuraira kuishandisa uchave unotevera:
Para tamba vhidhiyo yatinofanira kungoita iwo unotevera kuraira
Isu tinofanirwa kuratidza mune yekuraira iyo ip kero yeChromecast yedu kana zita raunoshandisa.
Zvakare sezvakataurwa mukati mehunhu, isu tinogona inogonesa kutenderera kwemavhidhiyo mafomati ayo asingatsigire mudziyo wedu izvi tinofanira kuwedzera zvinotevera paramende.
Para wedzera zvinyorwa zvidiki kuvhidhiyo, tinozviita neimwe paramende:
Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare tumira zvirimo online:
Para mira kutamba wobva wadzvanya ctrl + c nezve iyo terminal.
Pakupedzisira, iyo mirairo yekutonga inotevera:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Stream2Chromecast: Kanda mavhidhiyo ako kubva kumagumo kuenda kuChromecast yako